किन चल्यो प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ ? यस्तो छ भित्री नालीबेली [भिडियोसहित] – Jaljala Online
जेठ २२, काठमाडौं । बजारमा अहिले एउटा गीतको खुबै चर्चा छ, प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ । यूट्यूब, टिकटक, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चारमाध्यममा गीतले स्थान जमाएको छ ।
यो खबर सुशील नेपालले लोकान्तरमा लेखेका छन् । बजारदेखि गाउँसम्म, बालकदेखि वृद्धसम्म । सबै क्षेत्र र उमेर समूहले गीत अत्याधिक रुचाएका छन् । १५ मिनेट लामो गीतको भिडियो १० दिनअघि सार्वजनिक गरिएको हो ।
यो अवधिमा झण्डै ७० लाख दर्शक पाइसकेको छ भने यूट्यूब ट्रेन्डिङमा केही दिनदेखि पहिलो स्थान जमाइरहेको छ ।
सम्भवतः लोकदोहोरीको इतिहासमै छोटो समयमा धेरै दर्शक पाउने गीत बनेको छ ‘गलबन्दी’ ।
किन यति लोकप्रिय बन्यो यो गीत ? सर्जक प्रकाश भन्छन्, ‘सर्वप्रथम त गीतको पनि आफ्नै भाग्य र संयोग हुँदोरहेछ । एउटा भाग्य र संयोग लिएर आएको रहेछ गलबन्दी ।’
प्रकाश गीत लोकप्रिय हुन्छ भनेर काम गर्दैनन् तर काम जतिसक्दो राम्रो गर्न भरपूर मेहनत गर्छन् । भाग्य, संयोग र मेहनत मात्र त पक्कै होइन, गीत लोकप्रिय हुनाका अन्य कारण पनि पहिल्याउँछन् ।
प्रकाश थप्छन्, ‘गलबन्दी हाम्रै समाजको कथा हो तर हामीहरूले अलिकति बिर्सिसकेको कथा । केही पुरानो हाम्रै कथालाई गीतले उजागर गरेको हुनाले पनि स्रोता–दर्शकले रुचाउनुभयो ।’
रोधी बस्ने, झ्याउरे गाउने गाउँघरको पुरानो परम्परा हो । त्यही परम्परा झल्काउँदै ठेट स्थानीय शब्द र सरल भाकामा फिल्मी शैलीमा ‘गलबन्दी’ बुनिएको छ ।
गीतको प्रस्तुती, रोधी र झ्याउरेको झल्को, बीचबीचमा गाउँघरमा बोलिने ठेट संवादको प्रयोगले गीतलाई आकर्षक बनाएको छ । गीतमा प्रकाश र शान्तीश्री परियारको स्वर र प्रस्तुती उत्कृष्ट छ ।
प्रकाश स्वयं र मोडल अञ्जली अधिकारीको अभिनय गीतको बलियो पक्ष हो । धेरैले प्रकाशको चञ्चलता र अञ्जलीको लजालुपनको प्रशंसा गरेका छन् । गायन र मोडलिङमा अब्बल प्रकाश निर्देशकीय पक्षमा पनि अब्बल देखिए ।
हामी कहाँ दिनैपिच्छे नयाँ–नयाँ गीतहरू सार्वजनिक हुन्छन् । धेरैमा नविनता पाइँदैन, मौलिकता पाइँदैन । त्यसैले त यूट्यूबमा सार्वजनिक हुने अधिकांश गीत यूट्यूबमै हराउँछन् । नविनता र मौलिकता नहुँदा दिनमै हराउने गीतको भीडबाट टाढा रह्यो ‘गलबन्दी’ ।
‘स्रोता–दर्शकलाई मौलिकता, नविनता र आफ्नोपन मनपर्छ,’ वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक नारायण रायमाझी भन्छन्, ‘गीतको भावअनुसार भिडियोमा साना–साना कुरालाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।’
गाउँले परिवेशमा खिचिएको भिडियोको प्रस्तुती, ठेट शब्द, लय, स्वर, अभिनय र संवादलाई वास्तविक ढंगले उतार्नु नै गीतको सफलता भएको रायमाझीको तर्क छ ।
यस किसिमका सिर्जनाले लोकदोहोरी गीतलाई हेर्ने दर्शकको दृष्टिकोण समेत राम्रो बन्दै गएको उनी बताउँछन् ।
आज देशभर कस्तो रहला मौसम ? यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
Posted on September 1, 2019 September 1, 2019 Author Jaljala Online
भदौ १५, काठमाडौं । आज (आइतबार) काठमाडौं उपत्यकाहित मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रमा दिनभरजसो पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखका मौसमविद् समीर श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमका धेरै ठाउँमा रातिदेखि नै पानी परिरहेको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तुलगायत आसपासका क्षेत्रमा अहिले (आइतबार बिहान ७ बजे) भारी वर्षासमेत भइरहेको छ। ‘यो क्रम अझ दुई÷तीन घण्टा […]
रविका नाममा अमेरिकाबाट पूर्वपत्नीले सामाजिक संजालमा लेखिन यस्तो भावुक स्टाटस [स्टाटससाहित]
ईशा लामिछाने । हुन त मैले यो विषयमा केही बोल्नु उचित नहोला भन्ने सोचेकी थिएँ । तर, पछिल्ला केही दिनमा मेरो एउटा स्टाटसलाई आधार बनाएर अड्कलकै आधारमा समाचारहरु आइरहेको देखेपछि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकी छु । रवि लामिछाने मैले २५ वर्ष सहयात्रा गरेका श्रीमान मात्र होइन, मेरा दुई छोरीका बाबु पनि हुन् । […]